သိပျမကွာခငျမှာ ကိုယျမသိဖာသာနဲ့ မသှေ့ားလိမျ့မယျ – Shinyoon
တဈခါတဈလမှော . . . မပေ့ဈဖို့တှေးထားတဲ့ အရာကိုမှ ပိုပွီး သတိရနတေတျတာမြိုးလေ . . .
အခြိနျဆိုတဲ့သမားတျောကွီးလဲ အိပျငိုကျနတေယျထငျပါတယျ အချြနျတှေ တရှရှေ့သေ့ာ ကုနျဆုံးခဲ့တာ မပေ့ဈခငျြနတေဲ့အကွောငျးအရာတှကေ ဆကျပွီး သတိရဖို့ကောငျးနတေုနျးပဲ အဲ့လို ခဏခဏပွနျပွီး အမှတျရနတေဲ့ အတိတျတှထေဲမှာ မကောငျးတဲ့ အတိတျတှကေ ပိုပွီးမြားပါတယျ မဖေို့ ကွိုးစားလလေေ ပိုပိုပွီးသတိရလလေပေါပဲ ထပျပွီးလဲ နာကငျြရတယျလေ
ဂဲမှနျခဲ့ဖူးတဲ့စာသူငယျလိုပေါ့ ….နောကျတဈကွိမျပွနျပွီးနာကငျြရမှာကို မသိစိတျက စိုးရှံ့ပွီး ကွောကျရှံ့နတေတျတာမြိုးလေ …ဒါပမေယျ့ အတိတျကို ပွနျပွနျတှေးပွီး ထပျခါထပျခါ ပွနျပွီးနာကငျြနရေတာက … ဘ၀မှာ နှဈခါသုံးခါ ထပျထပျပွီးသရေတာနဲ့တူတယျ ။
မပေ့ဈလိုကျပါဆိုတဲ့စကား …အပွောမှာ လှယျပါတယျ တကယျလကျတှမှေ့ာ မပေ့ဈဖို့ အားထုတျတဲ့အခါ ပိုပိုပွီးသတိရနတေတျတာလဲ သဘာဝလိုပါပဲ ။ ငါ သူ့ကို မမေ့ယျ မမေ့ယျနဲ့ မမနေို့ငျတဲ့အပွငျ ပိုပွီးသတိရနတေတျသေးတာ အဲ့လိုအခြိနျတှေ အမြားကွီး ကွုံတှခေဲ့ရဖူးပါတယျ ။
အဲ့လို … ခဏခဏပွနျတှေးပွီး ခဏခဏနာကငျြရတဲ့အခါ … အကောငျးဆုံး နညျးလမျးလေးတဈခုလေးကို ညှနျပေးမယျ … သူ့ကို သတိရခြိနျမရအောငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ခိုငျးပါ … ဝါသနာပါတဲ့အရာတှကေိုပဲဖွဈဖွဈ တဈစိုကျမတျမတျလုပျတာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျလုပျစရာရှိတဲ့အလုပျကို မအားလပျအောငျ လုပျတာပဲဖွဈဖွဈ သတိရခြိနျမပေးပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခိုငျးတဲ့အခါ အခြိနျကွာလာတဲ့အမြှ ကိုယျမသိခငျမှာပဲ နသေားကလြာလိမျ့မယျ ။
တဈယောကျတညျးနတောထကျ … အရငျက ကိုယျအမှုမဲ့အမှတျမဲ့နခေဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ့ သိုကျသိုကျဝနျးဝနျးလေးနေ … နာကငျြကွကှေဲနတောထကျစာရငျ နှေးနှေးထှေးထှေးလေးနတောက အထီးကနျြမဆနျတော့ဘူးပေါ့ ။ ကိုယျ့အပေါငျးအသငျးမိတျဆှတှေနေဲ့.. အခြိနျတှဖွေုနျးပါ … လညျစရာပတျစရာတှလေညျ စားရငျသောကျရငျး ငယျကြိုးငယျနာတှဖေျောရငျး ပြျောပြျောပါးပါးလေး နေ …. အခြိနျက ကုစားသှားမှာပါမဟုတျဘူး တခြို့ဒဏျရာတှကေ ကိုယျကိုယျတိုငျကုစားရတာမြိုးလေ ။
တဖွေးဖွေး နသေားကလြာလိမျ့မယျဆိုတာထကျ …. ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ကိုယျ တဖွေးဖွေးခငျြး ​ပြျောတတျလာလိမျ့မယျ ။ အနားမှာမရှိလဲ တဖွေးဖွေးနသေားကလြာလိမျ့မယျ ။ အရငျလို ခဏခဏသတိရနတောထကျ သိပျမကွာခငျမှာ ကိုယျမသိဖာသာနဲ့ မသှေ့ားလိမျ့မယျ ။ အမှတျတရတှရှေိတဲ့အခါ သတိတရရှိတတျတာတော့ သဘာဝပါ … ဒါပမေယျ့ အရငျလို ခဏခဏ တမျးတရငျး နာကငျြစရာမလိုတော့ဘူး ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ . . . မေ့ပစ်ဖို့တွေးထားတဲ့ အရာကိုမှ ပိုပြီး သတိရနေတတ်တာမျိုးလေ . . .
အချိန်ဆိုတဲ့သမားတော်ကြီးလဲ အိပ်ငိုက်နေတယ်ထင်ပါတယ် အခ်ျန်တွေ တရွေ့ရွေ့သာ ကုန်ဆုံးခဲ့တာ မေ့ပစ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဆက်ပြီး သတိရဖို့ကောင်းနေတုန်းပဲ အဲ့လို ခဏခဏပြန်ပြီး အမှတ်ရနေတဲ့ အတိတ်တွေထဲမှာ မကောင်းတဲ့ အတိတ်တွေက ပိုပြီးများပါတယ် မေ့ဖို့ ကြိုးစားလေလေ ပိုပိုပြီးသတိရလေလေပါပဲ ထပ်ပြီးလဲ နာကျင်ရတယ်လေ
ဂဲမှန်ခဲ့ဖူးတဲ့စာသူငယ်လိုပေါ့ ….နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးနာကျင်ရမှာကို မသိစိတ်က စိုးရွံ့ပြီး ကြောက်ရွံ့နေတတ်တာမျိုးလေ …ဒါပေမယ့် အတိတ်ကို ပြန်ပြန်တွေးပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြီးနာကျင်နေရတာက … ဘ၀မှာ နှစ်ခါသုံးခါ ထပ်ထပ်ပြီးသေရတာနဲ့တူတယ် ။
မေ့ပစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့စကား …အပြောမှာ လွယ်ပါတယ် တကယ်လက်တွေ့မှာ မေ့ပစ်ဖို့ အားထုတ်တဲ့အခါ ပိုပိုပြီးသတိရနေတတ်တာလဲ သဘာဝလိုပါပဲ ။ ငါ သူ့ကို မေ့မယ် မေ့မယ်နဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့အပြင် ပိုပြီးသတိရနေတတ်သေးတာ အဲ့လိုအချိန်တွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ် ။
အဲ့လို … ခဏခဏပြန်တွေးပြီး ခဏခဏနာကျင်ရတဲ့အခါ … အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလေးတစ်ခုလေးကို ညွှန်ပေးမယ် … သူ့ကို သတိရချိန်မရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုင်းပါ … ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို မအားလပ်အောင် လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သတိရချိန်မပေးပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခိုင်းတဲ့အခါ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ ကိုယ်မသိခင်မှာပဲ နေသားကျလာလိမ့်မယ် ။
တစ်ယောက်တည်းနေတာထက် … အရင်က ကိုယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့ မိသားစုနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလေးနေ … နာကျင်ကြေကွဲနေတာထက်စာရင် နွေးနွေးထွေးထွေးလေးနေတာက အထီးကျန်မဆန်တော့ဘူးပေါ့ ။ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့.. အချိန်တွေဖြုန်းပါ … လည်စရာပတ်စရာတွေလည် စားရင်သောက်ရင်း ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေဖော်ရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါးလေး နေ …. အချိန်က ကုစားသွားမှာပါမဟုတ်ဘူး တချို့ဒဏ်ရာတွေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုစားရတာမျိုးလေ ။
တဖြေးဖြေး နေသားကျလာလိမ့်မယ်ဆိုတာထက် …. ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် တဖြေးဖြေးချင်း ​ပျော်တတ်လာလိမ့်မယ် ။ အနားမှာမရှိလဲ တဖြေးဖြေးနေသားကျလာလိမ့်မယ် ။ အရင်လို ခဏခဏသတိရနေတာထက် သိပ်မကြာခင်မှာ ကိုယ်မသိဖာသာနဲ့ မေ့သွားလိမ့်မယ် ။ အမှတ်တရတွေရှိတဲ့အခါ သတိတရရှိတတ်တာတော့ သဘာဝပါ … ဒါပေမယ့် အရင်လို ခဏခဏ တမ်းတရင်း နာကျင်စရာမလိုတော့ဘူး ။